नेपाल आज | प्रचण्ड र ओलीबीच बोलचाल बन्द!
साउन १३ गते बसेको नेकपा स्थायी कमिटिको बैठक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बसाएका थिए । तर नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले स्थगित गरेपछि पार्टीमा तीव्र असन्तुष्टी बढेको छ । ओलीले सरकार फुटाउँछु भन्दै घुर्काउने गरेकोले , समस्याको विकल्प र समाधान खोज्नुपर्छ भनिरहँदा ३ महिना बित्यो भन्ने प्रचण्डको बुझाइ छ । ओलीले प्रचण्डलाई बिरालोले मुसालाइ घुमाए जस्तै घुमाइरहने ठहर गरेर प्रचण्ड ओलीलाई एक्लै नभेट्ने निचोडमा पुगेका छन् ।
बोलचाल बन्द प्रायः छ
ओलीको प्रचण्डसँग मात्र नभई अरु नेताहरुसँग पनि बेलचाल बन्द हुनेगरेको थियो । ओलीले पर्टी एकीकरण पहिला तत्कालीन एमालेमा माधव नेपाल र झलानाथ खनालसँग पनि यस्तै बोलचाल बन्द हुने गर्दथ्यो भन्ने कुरा कर्याकर्ताहरु नै चर्चा गर्ने गर्द्थे ।
स्थाइ कमिटिको बैठक एकतर्फी रुपमा ओलिले स्थगित गरेपछि खानाल साक्षी बनाउदै प्रचण्डले ओलिलाइ भेटेका थिए । माधव नेपालले भने ओलीलाई किन भाउ दिने भनेर भेट्न गएनन ।
प्रचण्डलाई ओलीको हूलाकी जवाफ !
प्रचण्ड र माधव नेपाल जस्ता थुप्रै नेताले ओलीलाई दुईवटै पदबाट राजीनामा दिन भनी आग्रह गरेपछि प्रचण्ड र ओलीबीच छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्ने भनिएको थियो । तर ओलीले जहिले पनि घुमाउने र झुक्याउने ठहर गर्दै प्रचण्डले ओलिलाइ एक्लै नभेट्ने निस्कर्समा पुगे । सम्बादहीनताको स्थिती सृजना भएपछी हुलाकी बने महसचिब बिष्णु पौडेल। ओलिले ऊनी मार्फत प्रचण्डलाई सन्देस पठाउने गरेका छन । ओलिले सकेको गर्नु, मबाट आश नगर्नु भनेर पौडेल मार्फत सन्देश पठाएको बुझिन्छ । दुईबीच बोलचाल बन्द भएपछि ओलीले आफुनो सन्देश पौडेलमार्फत पठाउने गरेका हुन् । आज फेरि प्रचण्ड झलनाथ खनाललाई लिएर ओली भेट्न भनी गएका छन् ।